Ciidanka Danab oo soo furtay in ka badan 30 caruur ah. | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED Ciidanka Danab oo soo furtay in ka badan 30 caruur ah.
Ciidanka Danab oo soo furtay in ka badan 30 caruur ah.
Ciidamada Xoogga Dalka qeybtiisa Kumaandooska ee Danab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen Dagmada Kuntuwaarrey ee Gobalka Shabeellada hoose waxey ku soo furteen 33 Carruur ah oo aan qaangaar ahayn, kuwaas oo ay si qasab ah uga soo wateen waalidiintooda malleeshiyada Al-shabaab si ay u baraan afkaarta xagjirnimada ah ee ay aaminsanyihiin.
Taliska Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid lasii qorsheeyay islamarkaana uu sii socon doono.
Previous articleMadaxweyne Famaajo oo hortagaya Golaha shacabka.
Next articleMadaxweynaha JFS oo ku wajahan Dhuusa-mareeb.